अभिनेत्री मनिषा कोइराला राजनीतिमा आउने !
शुक्रबार , २६ असार २०७७
बुधबार जेठ २१, २०७७/ Wednesday 06-03-20
काठमाडौं । मुलुकको परिवर्तन र राजनीतिमा कोइराला परिवारको ठूलो योगदान रहेको छ । भारतको स्वतन्त्रताका लागि लडेको कोइराला परिवारले राणा शासन, पञ्चायत र राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था, प्रजातन्त्रदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न ठूलो योगदान गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसबाट राजनीतिक गरेका कोइराला परिवारले मात्रै नभएर मुलुकले सधैं सम्झिरहने नेता हुन् वीपी कोइराला । वीपी राणा शासनदेखि पञ्चायतविरुद्धसम्म लडे भने पञ्चायतदेखि राजाको सक्रिय शासनविरुद्ध गिरिजाप्रसाद कोइराल लडेर मुलुक गणतन्त्रसम्म आइपुगेको छ ।
कोइराला परिवारबाट अहिले सक्रिय राजनीतिमा सुजता कोइराला, डा. शेखर कोइराला र डा. शशांक कोइराल रहेका छन् । उनीहरु राजनीतिमा रहेको कोइराला परिवारको विरासत जोगाउन लागिपरेका छन् । तर, यही बेला वीपीकी नातिनी, प्रकाश कोइरालाकी छोरी अभिनेत्री मनिषा कोइराला नेपालमा राजनीतिमा आउने चर्चाले अहिले स्थान पाइरहेको छ । भारतमा गान्धी परिवारको जस्तै नेपालमा कोइराला परिवारको राजनीतिमा बेग्लै खालको भूमिका रहँदै आएको छ ।
यसले पनि अभिनेत्री मनिषा नेपालको राजनीतिमा आउनुलाई अचम्म मान्नु पर्ने देखिँदैन । भारतका कयौँ कलाकार राजनीतिमा आएका छन् । पूर्व क्रिकेटर तथा ब्राडफोर्ड विश्वविद्यालयका पूर्व कुलपति इमरान खान पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री हुन् । कला, खेललगायतका क्षेत्रमा स्थापित भइसकेका व्यक्ति राजनीतिमा आउने चलनजस्तै रहेको छ ।
हालै सरकारले लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक समेटेर मुलुकको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अद्यावधिक गरेको छ । यसबारे परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली गरेको ट्वीटमा रिट्वीट गरेकी मनिषाविरुद्ध भारतीय मिडिया लागेपछि उनको देशभक्तिको रुपमा सामाजिक सञ्जालमा तारिफ भयो ।
उनलाई राजनीतिमा आउन सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले आग्रह गरे । तर, यस बेला भारतमा रहेकी मनिषा मंगलबार बेलुकी बेलहिया नाकाबाट नेपाल भित्रिएकी छन् । सीमानामा आइपुगेपछि नेपाली सेनाको टोलीले पिकअप गरेको मनिषा र उनको परिवारका सदस्यहरु होटलमा क्वारेन्टाइनमा बस्नेछन् ।
मनिषा नेपाल प्रवेश गरेसँगै उनी राजनीतिमा प्रवेश गर्ने चर्चाले अहिले बहस पाइरहेको छ । बलिउडमा स्थापित अभिनेत्री मनिषाले आफू राजनीतिमा आउने या नआउने विषयमा हालसम्म कुनै धारणा सार्वजनिक गरेकी छैनन् । तर, उनी राजनीतिमा आउने माहोल भने बनाइरहेकी स्रोतले जानकारी दियो ।
पछिल्ला वर्ष सामाजिक कार्यमा सक्रिय रहेकी उनी चलचित्र क्षेत्रमा भने देखिन छाडेकी छन् । यसले पनि आफ्नो हजुरबुवा वीपी र बुवा प्रकाशको राजनीतिक विरासत जोगाउन मनिषामा राजनीतिमा आउने तयारी गरेकी हुन् ।
यी अभिनेत्रीसँग विवाह हुनै लाग्दा सलमानको रोकिएको थियो विवाह, यसकारण हुन सकेन विवाह ?
‘डान्सिङ वीथ द स्टार नेपाल’ प्रसारणको अन्तिम तयारीमा, छिट्टै घरमै बसेर हेर्न पाइने
सुशान्त निधन प्रकरण : सलमानसहित ८ चर्चित कलाकारविरूद्ध दायर मुद्दा खारेज
टेलिकमले ल्यायो द्रुत गतिको इन्टरनेट चलाउन सकिने एफटिटिएच सेवा
पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गीले आफ्नै बुटिकमा मनाइन् जन्मदिन
सिन्धुपाल्चोक बाढी : मृतकका परिवार र गम्भीर घाइतेलाई एक लाख राहत दिइने
भित्ता र छानो बिनाको विश्वकै यो अनौठो होटल, जहाँ एक रात बिताएकै यति धेरै तिर्नुपर्छ !
भागेर होइन समस्यासँग जुधेर अगाडि बढ्न प्रहरी महानिरीक्षक थापाको निर्देशन
कपाल झरेर हैरान हुनुहुन्छ ? मेथीका यस्ता छन् आश्चर्यजनक फाइदा
कैलालीमा हत्कडीसहित थुनाबाट युवक फरार
सुशान्तपछि अर्का यी अभिनेताले पनि पासो लगाएर ज्यान फाले, बलिउडलाई अर्को झड्का
सम्झाउन खोज्दा यसकारण घर अगाडी नै कुटिए सलमान